> Resource > Utility > ma u diri kartaa ama waxay helayaan farriin qoraal - xaliso dhibaatada ka
Dad badan ayaa waxa ay ku dooneysaa "sababta aan u ma soo diri kartaa fariimaha qoraalka ah, ama ma ka heli kartaa farriin qoraal ah oo ku saabsan iPhone" ee discussions.apple.com. Dhab ahaantii, waxaa jira sababo badan oo keeni kara in dhibaatada. Haddii aad la kulanto dhibaato ah, waa in aad ogaado sababta aan kuu soo diri karaan ama ay helaan farriimaha qoraalka ah ka iPhone, qaaddaana xalka ugu habboon.
Calaamadaha 1: Ma heli karaa SMS text ama fariimaha tan iyo aad u wareegeen aad iPhone in a non-phone Apple, sida Android, Windows, ama telefoon BlacBerry.
Xalka: Haddii aad qorsheyneyso in ay soo iibsato a non-Apple phone cusub ama aad iibsatay hal, si looga fogaado in aan awoodin in ay helaan SMS text ama fariimaha, waa in aad la damiyo ama barkinta aad iMessage. Haddii kale, dadka qaba iPhone sii wadi doonaa in ay isticmaalaan iMessage in baaq loo diro qoraal si uu lambarka telefoonka, taas oo ay sabab ka dhigi doonaa in aad ka maqnaan fariimaha qoraalka ah. Halkan waxa ku jira siyaabo loo damiyo (barkinta) iMessage:
* Haddii aad weli aad iPhone aad gacanta ku kaarka SIM jirta, ka dibna la saaraa SIM galay aad iPhone> jeedin ku saabsan iPhone> Settings tuubada> Messages> dadban iMessage in OFF.
* Haddii aad mar dambe ma aad jir iPhone dhow dahay ama mar dambe SIM ee iPhone ka shaqeeyaa, si rasmi ah u furan Apple ee webpage selfsolve on your computer, gali lambarka taleefanka si aad u hesho code xaqiijinta> geli furaha xaqiijinta in sanduuqa.
Calaamadaha 2: weli ma ay heli karaan farriimaha qoraalka wax ka isticmaala iPhone
Xalka: Haddii aad isku dayay siyaabaha kor ku xusan in ay iska diiwaan gelin aad iMessage, oo weli aan ka isticmaala iPhone heli kartaa fariimaha qoraalka ah, gaar ahaan marka user iPhone isticmaalo wada hadal ah oo jira jir in aad fariin qoraaleed, waa inaad weydiisaa isaga ama iyada si ay u bilaabaan wada hadal cusub inay kuu soo diraan fariin ah. Si aad u hesho waxa ay bilowday, waa in isaga ama iyadu hore tirtirto wadahadalka hadda jira.